ब्युटिसियन रुस्काको आइटिसी ट्रेनिङ स्कुलले भव्यरुपमा मनायो १८ औ वार्षिक उत्सव - Business World
ब्युटिसियन रुस्काको आइटिसी ट्रेनिङ स्कुलले भव्यरुपमा मनायो १८ औ वार्षिक उत्सव
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ | १३:२६:४७
सौन्दर्यकलामा पोख्त रुस्का श्रेष्ठ बैधले सञ्चालनमा ल्याएको स्कुल अफ ब्युटिसियन आइटिसी स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टरले १८ औ वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ । आइटिसी ट्रेनिङ स्कुलले बनेपा तथा नक्सालबाट तालिम सञ्चालन गर्दे आएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रो.डा. राज्यश्री श्रेष्ठ ,विशेष अतिथि पूर्व नेपाल सुन्दरी उषा खड्की त्यस्तै अतिथि सीता पाठक ,दिकपाल कार्की, सुशान काजी श्रेष्ठ ,सनिस शाक्य लगायतले सहभागिता जनाएका थिए । उनी नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को शृङ्गार कला संकायको प्रमुखको पदमा विगत लामो समय देखि कार्यरत छिन् ।
विशेष अतिथि पूर्व नेपाल सुन्दरी उषा खड्की
नेपालमा पहिलो पटक ब्युटिसियन तालिम सञ्चालन सुरु गरेकी प्रख्यात ब्युटिसियन तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका महिला उद्यमी परिषद्का प्रमुख कमला श्रेष्ठले अनलाइन मार्फत आफ्नो प्रिय छात्रा रुस्कालाई शुभकामना दिँदै उनको प्रगतिबाट आफू अत्यन्त खुसी भएको सन्देश व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले अत्यन्त कढीन परिस्थितिमा समेत आइटिसी ट्रेनिङ स्कुलले आफ्नो यात्रा जारी राख्दै १८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा रुस्कालाई आउँदा दिनमा उनको तर्फबाट सहयोग गरिने जनाएकी थिइन् ।
ब्युटिसियन कमला श्रेष्ठ
आइटिसी ट्रेनिङ स्कुलमा ब्युटिसियन तालिम अन्तर्गत डिप्लोमा लेभल उर्तीण गरेका ४० भन्दा बढीका छात्रालाई प्रमुख अतिथि प्रो.डा. राज्यश्री श्रेष्ठ प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । सोही अवसरमा आइटिसीले आफ्नो पहिचानको लागि नयाँ लागो अनावरण गरिएको थियो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आयोजना गरिएको “माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे” का विजेता रुबीनालाई सम्मान स्वरूप ताज पहिराइएको थियो । नेपाललाई विश्व फेसन बजारमा फेसन गन्तव्यको रूपमा स्थापीतगर्ने उद्देश्यले सो फेसन सोको आयोजना गरिएको थियो । उक्त फेसन शोका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मेकअपको जिम्मा आइटिसी ट्रेनिङ स्कुले पाएको थियो ।
ब्युटिसियन सम्बन्धी विज्ञहरूले नेपालमा व्यवसायीक रूपमा फस्टाउँदै गएको सौन्दर्य कला बजारलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने धारण राखेका थिए ।
ब्युटिसियन रुस्काले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दे १८ औँ वर्षमा आइपुगेको आफ्नो अनुभव बताइन् । कार्यक्रममा अतिथि बनेका पूर्व मिस नेपाल उषा खड्कीले ब्युटी कलाको बढ्दो व्यावसायिकताले औषध महिला यही पेसालाई जिविको उपार्जन बनाउन सफल भएको बताइन् ।